WunYan – Page 63
လေဆိပ်ထဲမှာ အုတ်အော် သောင်းတင်း ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ စိန် ခြေချင်းနှင့် ကြက်မလေး
ထိုင်းလေဆိပ်တခုတွင်းမှာ စိန်ခြေချင်းတွေ ဝတ်ဆင်ထားခဲ့တဲ့ ကြက်မကလေးတကောင်ကြောင့် ခရီးသည်တွေကြားမှာ အုတ်အော်သောင်းတင်း ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်လို့ ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းမှာ ဒီကနေ့ ဖော်ပြပါတယ်။ အသက် ၆၀ အရွယ် ကလျာနီယင်မ်ဆီရိအမည်ရ အမျိုးသမီးဟာ သူမ မွေးမြူထားတဲ့ ကြက်မလေးနဲ့အတူ တရုတ်မိတ်ဆွေတဦးကို တွေ့ဆုံဖို့ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်ကို ရောက်လာခဲ့တာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကြက်မလေးရဲ့ ခြေထောက် နှစ်ဖက်စလုံးမှာ ဝတ်ဆင်ပေးထားတဲ့ စိန်ခြေချင်းတွေဟာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေအတွက် မျက်စိကျ စိတ်ဝင်စားစရာ…
ဦးကင်းကောင် ရက်လည် အတွက် အလှူငွေ သိန်းနှစ်ဆယ် လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ ဧရာဝတီဘဏ် ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော် တွေ့ဆုံကြုံကွဲဖြစ်မြဲ ဓမ္မတာဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်းကိုယ်အရမ်းချစ်တဲ့သူတွေ ဘဝတစ်ပါးကိုပြောင်းရွှေ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါ ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေမှာ ရူးမတတ်နာကျင်ကြေကွဲရတာပါပဲ။ ဦးကင်းကောင်ရဲ့ဆုံးပါးသွားမှုဟာလည်း အနုပညာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုရိုက်ခတ်သွားခဲ့သလို တစ်နိုင်ငံလုံးက ပရိသတ်တွေဟာလည်း ဦးကင်းအတွက် ဝမ်းနည်းပူဆွေးခဲ့ကြရပါတယ်။ဦးကင်းကောင်ဟာ ပုပ္ပားမှာဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုရိုက်ကူးနေစဉ်အချိန်မှာပဲ မမျှော်လင့်ပဲချွဲကျပ်ပြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပါ။ ဦးကင်းကောင်ရဲ့ ဈာပန အခမ်းအနားကိုတော့ ဇန်န၀ါရီလ (၂၄) ရက်နေ့၊ မနက် (၉)…
အိန္ဒိယ ကျောင်းသား လူငယ်များ ပြုလုပ်သည့် ဂြိုဟ်တုငယ် အာကာသထဲ ရောက်ပြီ
အိန္ဒိယ ကျောင်းသား လူငယ်များ ပြုလုပ်သည့် ဂြိုဟ်တုငယ် အာကာသထဲ ရောက်ပြီ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဆယ်ကျော်သက် ကျောင်းသားလူငယ်တစ်စု ပြုလုပ်သည့် “ကလမ်ဆက် (KalamSat)”အမည်ရှိ ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တုငယ်တစ်လုံးကို အခြားဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တုများနှင့်အတူတကွ အိန္ဒိယနိုင်ငံအာကာသလေ့လာရေးအဖွဲ့က ယမန်နေ့က လွှတ်တင်ပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါဂြိုဟ်တုငယ်သည် ၁၀စင်တီမီတာအရှည်ရှိသော ဆလင်ဒါပုံစံဖြစ်ကာ အလေးချိန် ၁ ဒသမ ၂ ကီလိုဂရမ်ရှိပြီး သက်တမ်း ၂လခံမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် အကာသသိပ္ဗံလေ့လာသော ကျောင်းသားများပြုလုပ်သည့် ပထမဆုံးဂြိုဟ်တုဖြစ်ပြီး…
“ခေတ်သစ်” ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ ကူညီမှုကို လက်ခံလိုက်ပါပြီ ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင် အံ့မင်းညို သရုပ်ဆောင် အံ့မင်းညိုဟာ အဆိုတော်လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေတို့ ဖောင်ဒေးရှင်း ဖြစ်တဲ့ “ခေတ်သစ်” ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ ကူညီမှုကို သဘောတူညီလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သမီးလေးကို အခုလိုမျိုး အစစအရာရာ ကူညီပေးတဲ့သူ ပေါ်လာလို့ အရမ်းကို ဝမ်းသာမိပါတယ်လို့ အံ့မင်းညိုက ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် သမီးလေးရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဇန်နဝါရီ(၃၁)ရက်နေ့တွင် နှလုံးစစ်ဆေးမှုတွေ…
ကင်ဆာ ဘေးဆိုးကို ကာကွယ်နိုင်မည့် အသီးအနှံ ၁၀ မျိုး
ကင်ဆာ ဘေးဆိုးကို ကာကွယ်နိုင်မည့် အသီးအနှံ ၁၀ မျိုး ( ၁ ) ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းနှင့် ဂေါ်ဖီထုပ် ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ Brussel (ကွမ်းသီးဂေါ်ဖီထုပ်)၊ ပဲပင်ပေါက်၊ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ကိုက်လန်၊ မုန်ညင်းမက်စေ့ စားမြန်ရည်နှင့် မုန်လာဥ စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်၊ အဲဒီဟင်းသီဟင်းရွက်တွေထဲက ကင်ဆာကို တိုက်ခိုက်ပေးနိုင်မဲ့ ဓာတ်သဘာဝပစ္စည်းတွေ အများအပြား ပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်၊ အဆိုပါ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေထဲက ရရှိမယ့် အင်ဇိုင်းတွေကပဲ ကင်ဆာဖြစ်စေမယ့်…
ဒီမနက် လဘ္ကက်ရည်ဆိုင်မှာ ကြုံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေး
ဒီမနက် လဘ္ကက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တယ် ။ ဆိုင်ထဲစားပွဲဝိုင်းတွေက အပြည့် ကိုယ်ထိုင်တဲ့ဝိုင်းမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ ။ အဲ့ဒီမှာ အဖိုးနဲ့အဖွား နှစ်ယောက်က ကိုယ့်ဝိုင်းမှာလာထိုင်တယ် ။ အဖိုးက ကိုယ်သောက်ဖို့ ရေနွေးခွက် ငှဲ့ပေးတယ် ။ ကိုယ်သတိမထားမိလိုက် ။ ကိုယ်က ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ကြည့်နေတာကိုး။ အဖိုးနဲ့အဖွား စကားပြောတာတွေ တစွန်းတစကြားမိတယ်။ သူတို့က ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ။ အဖွားက သူ့သားပင်စင်ကို လာထုတ်တာတဲ့…
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ယခုနှစ် သင်္ကြန် မန်းမြို့တော်ဝန် မဏ္ဍာပ်တွင် ဖျော်ဖြေမည်
Posted on January 25, 2019 by whuk-46651
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ယခုနှစ် သင်္ကြန် မန်းမြို့တော်ဝန် မဏ္ဍာပ်တွင် ဖျော်ဖြေမည် “ကျွန်တော် ဒီနေ့ မန္တလေးက ပရိတ်သက်များနဲ့ဆုံတွေ့ရတဲ့အတွက် အထူးဝမ်းသာပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကတော့ ကိုထွန်းထွန်းရယ်၊ မဖွေးဖွေရယ်နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ ကြာတော့သည်လည်း မောင့်စကားဇာတ်ကားက ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်မှာ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေး ရုပ်ရှင်ရုံကြီးတွေမှာ စတင်ပြသသွားမှာဖြစ်လို့ အားပေးကြပါဦး။ အကယ်ဒမီအတွက် ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူး။ ဒီနေ့ မန္တလေးက ပရိတ်သက်ကြီးကိုတွေ့ရလို့ အထူးဝမ်းသာတယ်။ ၂၀၁၉…
️Hot Plate မီးဖို အသုံးပြုသူများ သိထားရမည့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ
Posted on January 25, 2019 January 25, 2019 by whuk-46651
Hot Plate မီးဖို အသုံးပြုသူများ သိထားရမည့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ ဒီနေ့လည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ သတိလက်လွတ် ဖြစ်မိမှာ စိုးရိမ်လို့ သတိပေးတဲ့ အနေနဲ့ ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ မိတ်ဆွေကောင်း ဖောက်သည်ကောင်းတို့ 1. မီးဆွဲအား 2000W 2200W လောက်ရှိခြင်းကြောင့် Extension Cord (ကြိုးခွေအ၀ိုင်းများ)နှင့် လုံးဝ မသုံးသင့်ပါ။ 2. မျက်နှာပြင် အပြား ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ချက်မည့်အိုးသည်…
အချိုမှုန့် ကြက်သားမှုန့် အစားထိုး ဟင်းခတ်မှုန့် အိမ်တွင် အလွယ် ပြုလုပ်နည်း
အချိုမှုန့် ကြက်သားမှုန့် အစားထိုး ဟင်းခတ်မှုန့် အိမ်တွင် အလွယ် ပြုလုပ်နည်း ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်လို့ အချိုမှုန့်ရော ကြက်သားမှုန့်ရော မစားချင်ပါဘူးဆိုတဲ့ အိမ်ရှင်မတွေအတွက် ကျန်းမာ ရေးနဲ့လဲ ညီညွတ်မယ်၊ လုပ်ရတာလဲ လွယ်ကူတဲ့ဟင်းခတ်မှုန့်ပြုလုပ်နည်းလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့ (၁) ကန်စွန်းဥ ၅၀ သား (၂) ကြက်သွန်နီ ၂၀ သား (၃) ကြက်သွန်ဖြူ ၅ ကျပ်သား…
အစာအိမ်လေနာ၊ အစာအိမ်အောင့်၊ အစာအဆိပ်သင့်၊ ဝမ်းဖောဝမ်းရောင်၊ ကိုက်ခဲနာကျင်တာတွေကို သက်သာစေတဲ့ ဗန်ဒါရွက်ရဲ့ ဆေးအသုံးဝင်ပုံ
အစာအိမ်လေနာ၊ အစာအိမ်အောင့်၊ အစာအဆိပ်သင့်၊ ဝမ်းဖောဝမ်းရောင်၊ ကိုက်ခဲနာကျင်တာတွေကို သက်သာစေတဲ့ ဗန်ဒါရွက်ရဲ့ ဆေးအသုံးဝင်ပုံ ဗန်ဒါ(ဗာဒံ)ရွက် ဗာဒံသီး ဟာ မြေပြန့်ဒေသ ပူအိုက်တဲ့ရာသီဥတု အတွက်တော့ မြန်မြန်နဲ့ လွယ်လွယ် အရိပ်ရလို့ တစ်ချိူ့ က မိမိအိမ်ခြံဝင်းမှာ အရိပ်ရအောင် စိုက်ကြတယ်။ နေရာတိုင်းမှာလည်း အလေ့ကျ ပေါက်ပါတယ်။ သို့သော် ဗန်ဒါပင်ရဲ့ အစွမ်းကိုတော့ သိသူ နည်းပါးပါတယ်။ ဗန်ဒါ ရွက်(ယခုပုံ)မှာ…
Previous 1 … 62 63 64 … 402 Next